Tonga amin'ny Mac ny fandikan-teny handika fiteny misy | Avy amin'ny mac aho
Ny mpamorona Alemanina Sonico Mobile dia efa namorona rindrambaiko mahafinaritra be hatry ny ela. fandikana amin'ny fiteny samihafa ho an'ny iPhone ary amin'ny ankapobeny ho an'ny fitaovana iOS. Angamba ny malaza indrindra no fampiharana iTranslate tena tsara, fampiharana maimaim-poana misy amin'ny iPhone sy iPad izay ahafahanao mandika teny sy lahatsoratra amin'ny fiteny 80 mahery.
Ity rindrambaiko ity dia manohana ny fidiran'ny feo sy ny vokatra ho an'ny ankamaroan'ny fiteny ary miasa tsara lavitra noho ny feony, amin'ny resaka fahatakarana, ny hafainganana amin'ny fitenenana ary ireo fiovana hafa izay misy fiatraikany amin'ny maha-marina ny fandikan-teny, rakotra tanteraka izy ireo. Ary koa misy kinova vaovao sy feno kokoa ary miaraka amina asa bebe kokoa antsoina hoe iTranslate Voice 2 avy amin'ilay orinasa iray ihany fa miaraka amin'ny vidiny € 1,99.
Ankehitriny, ity rindranasa malaza be ity dia tonga ao amin'ny Mac miaraka amin'ny fandefasana iTranslate ho an'ny Mac izay azo sintonina avy amin'ny Mac App Store amin'ny vidiny 4,49. Toy ny namesake ho an'ny iOS, ity fampiharana ity dia mitondra fanohanana mihoatra ny fiteny 80 sy ny fiasa toa ny fivoahan'ny feo, ny fidirana an-tsoratra haingana, ny rakibolana tafiditra ...
Ny endri-javatra lehibe an'ity fampiharana ity dia misy:
Mihoatra ny fitenenana 80: amin'ny iTranslate dia azonao atao ny mandika teny, andianteny ary lahatsoratra amin'ny fiteny 80 mahery.
TEXT amin'ny feo: Te hahafantatra foana ny feon'ny vehivavy amin'ny teny anglisy aostralianina ianao? Miaraka amin'ny iTranslate ianao dia afaka misafidy amin'ny fiteny maro samihafa, mifidy feo lahy na vavy, ary mifehy ny hafainganan'ny fitenenana aza.
Torohevitra: ny ankamaroan'ny fampiharana mpandika teny dia tsy manome afa-tsy valiny 1 isaky ny dikanteny. Na izany aza, raha mandika teny sy andian-teny ianao, dia matetika misy heviny samihafa, arakaraka ny zava-misy ao aminy. Manolotra diksionera amin'ny fiteny maro i iTranslate, mba hahafahanao mamaha tsara an'io olana io.
FANOMPOANA: Amin'ny romanisasi dia azonao atao ny mamadika «你好» ho «Nǐ hǎo». Ovay ho lasa litera latina ny fiteny tsy latina. Azo alaina amina fiteny maro, ao anatin'izany ny Sinoa, Japoney, Koreana, Grika, Hindi, Rosiana ary Thai.
TYPE FASTER: Iranslate dia havaozina ho an'ny fidirana an-tsoratra haingana. Sokafy ny fampiharana miaraka amin'ny tsindry bokotra azo zahana, mahazoa soso-kevitra rehefa manoratra ianao, ary mifamadiha haingana eo anelanelan'ny fiteny
Misy ny iTranslate ho an'ny sehatra samihafa miaraka amin'ny fihenan'ny vidiny 50% raha oharina amin'ny vidiny farany noho ny tolotra fanombohana. Ny RNy fepetra farafahakeliny ao amin'ny Mac dia ny processeur 64-bit Intel sy ny OS X 10.8 na ho avy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Programa Mac » Mac App Store » Nandefa tamin'ny Mac ny fandikan-teny
Trotamundo65 (@ Trotamundo65) dia hoy izy:
Mamaly an'i Trotamundo65 (@ Trotamundo65)
Malalaka ny mpandika teny manerantany ary manao toy izany koa
Apple dia namoaka Safari 7.1 sy 6.2 beta tsirairay avy ho an'ireo mpamorona sy mpampiasa ny programa beta